Le ndawo enhle eluhlaza eningizimu inhlokodolobha Ukrainian idonse ezandayo izivakashi. Ukuthola epaki Feofania (Kiev)? Kuyini ezithakazelisayo lapho ungabona?
Indlela ukuya epaki Feofania (Kiev)?
Feofania - yigama endaweni mlando, okuyinto etholakala engxenyeni eseningizimu yaleli dolobha Ukraine. Enyakatho-ke ngelanga ezicishe zibe Goloseevskiy ihlathi entshonalanga - kunomkhawulo yokuhlala afanayo Towers, futhi kusukela empumalanga - edolobhaneni Pirogovo. Itholakala Ipaki Feofaniya eKiev. Ikheli into kanje: Academician Lebedev emgwaqweni, 37. Ukuze afinyelele lapha unga ku imoto yakho siqu, noma izithuthi zomphakathi.
Ukuze uthole epaki Feofania (Kiev) emshinini wakho, udinga ukumboza ibanga amakhilomitha 17 kusukela enkabeni yedolobha. Car yokupaka iyatholakala kuleli kheli elilandelayo: Academician Lebedev emgwaqweni, 45.
Ukuze kwepaki kungabuye esafinyelelwa ezokuthutha zomphakathi. Uzodinga ukwenza omunye ukufakelwa: kuqala, uthathe Metro ukuya esiteshini "semibukiso", okuyinto ukudlulisa nesibalo ibhasi 548 futhi ukuya stop zokugcina.
Umlando omfishane kwendawo kanye kwepaki
Lesi sivumelwano sokuqala yasungulwa lapha 1741 (Ipulazi Lazarevka). Ekuqaleni kwekhulu XIX ke wasungula sezindela Bishop Feofan Shiyanov. Igama lakhe kamuva futhi yonke indawo eseningizimu Kiev owayemuhle wayebizwa ngokuthi. Engxenyeni lelo khulu leminyaka lesibili ezweni kwakungekaNkulunkulu Wezindela i-St Michael sika Theophany, futhi ngemva Okthoba Yenguquko ipulazi suburban yasungulwa lapha.
By the way, emgwaqweni okuholela epaki, ngakho okuthiwa hhayi ithuba. Phakathi nekhulu le-Athazeksesi, iqembu lososayensi Soviet eliholwa Academician Lebedev ungaphakathi Theophany bakha lokuqala elincane computer emhlabeni electronic (esifushanisiwe - MEVM).
Ipaki Feofaniya ekhatsi Kiev: isithombe kanye isimo samanje
isimo lesikhumbuzo landscape art ipheshana "Theophania" wathola ngo-1992. Ngo-2003, yaqala emikhulu umsebenzi wokuvuselela izakhiwo Kiev ukuzilibazisa zone. Ngo kwepaki kwakukhona izindlela egandayiwe nasezindaweni ezizungezile, amabhuloho futhi flowerbeds, nemithombo ehlotshiswe indawo, arbours nasezindaweni zokudlala zezingane. Feofania waba nendawo uhambo oluya endaweni kulolu yombhangqwana osanda kushada.
Ngaphakathi indawo yokuzilibazisa, kukhona iziphethu ezintathu ukuphulukisa, inzalo lapho kubonakala ngisho ososayensi Soviet. Eduze wabo Zezıhlabane lokushisa lamanzi okuyinto kunqoba 8 degrees, ngisho ehlobo. Geza e kunconywa kulabo babe nezinkinga zesikhumba.
Indawo yokungena kwepaki namuhla Feofania ikhokhwe. An ithikithi omdala kubiza 10 hryvnia, izingane - ilungelo 5. Abahamba Ngamabhayisekili ukugibela enqamula epaki kuyodingeka bakhokhe 20 hryvnia. Tours kufanele avumelane kusengaphambili (izindleko ihora nehamba isigamu ngokusebenzisa izinkambo Theophany - 120 hryvnia).
Amazing Eqinisweni: nalesi sakhiwo esihle has isimo lesikhumbuzo yezakhiwo ayikho esidlangalaleni, kodwa kuphela ukubaluleka lendawo! isonto Panteleimon lakhiwa ngo-1905 ngesikhathi isitayela laseMoscow lathumela, ngesicelo izindela we esigodlweni sezindela sangakubo. Umbhali isakhiwo isibe Kiev wezakhiwo owaziwa Eugene Ermakov.
Phakathi kwempi yezwe yesibili, kwakhiwa indlu enkulu yesonto lwabhidlika ngumuntu oqondile nosimende hit. Esikhathini poluruin ethempelini isimo kwaba kwaze kwaba sekuqaleni kwawo '90s, lapho eqala umsebenzi wokuvuselela izakhiwo yakhe. Kodwa ukusebenza ukubuyiselwa iconostasis yesontfweni namanje kuyaqhubeka.
Izivakashi, izivakashi inhlokodolobha, futhi nje abantu bomuzi kufanele nakanjani iya ku Park Feofaniya! Kiev, njengoba wazi, akugcini le Lavra, noma Maidan UZandile. Ziningi kwamanye amasayithi ezithakazelisayo futhi ezikhangayo, ukuvakashelwa oyoletha eziningi esiqala emihle. Omunye walena uwukuba Ipaki Feofaniya kanye lombhishobhi enhle Panteleimonovskaya.
Mayelana indawo Tuapse futhi kanjani lapho
Ibhuloho Dzhurdzhevicha e Montenegro
Hemophilia - yilokhu isifo? is futhi yiziphi kanjani izimpawu hemophilia?
"Undertaker" - umthole oyoxoxa kwendaba ngenxa yokudalwa
Kungenzeka yini ukuba wenze uhlelo lwekhompyutha ku bokusungula impahla Registry?
Isithuthuthu "i-Izh Planet 5": umlando wezithuthuthu zasekhaya